Iwu dị iche iche e nyere gbasara ịdị nsọ (1-37)
Otú e kwesịrị isi na-ewe ihe ubi (9, 10)
Ichebara ndị ntị chiri na ndị ìsì echiche (14)
Ekwutọla onye ọzọ (16)
Eburula mmadụ iwe n’obi (18)
Emela anwansi ma ọ bụ mgbaasị (26, 31)
Unu esenyela ihe n’ahụ́ (28)
Na-asọpụrụ ndị agadi (32)
Na-akwanyere ndị mbịarambịa ùgwù (33, 34)
19 Jehova gwara Mosis okwu ọzọ, sị: 2 “Gwa nzukọ Izrel niile okwu, sị ha, ‘Unu ga-adị nsọ, n’ihi na mụnwa, bụ́ Jehova Chineke unu, dị nsọ.+ 3 “‘Onye ọ bụla n’ime unu ga na-akwanyere nne ya na nna ya ùgwù.*+ Unu ga na-edebekwa ụbọchị izu ike m.+ Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu. 4 Unu efela chi na-abaghị uru.+ Unu emekwarala onwe unu chi a kpụrụ akpụ.+ Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu. 5 “‘Ọ bụrụ na unu na-achụrụ Jehova àjà udo,+ chụọnụ ya otú ga-eme ka ọ nabata ya.+ 6 A ga-eri anụ ya n’ụbọchị unu chụrụ àjà ahụ nakwa n’echi ya. Ma ihe fọrọ na ya ruo n’ụbọchị nke atọ, a ga-akpọ ya ọkụ.+ 7 Ma, ọ bụrụ na e rie ihe ọ bụla fọrọ na ya n’ụbọchị nke atọ, ọ bụ ihe rụrụ arụ. Chineke agaghị anabata ya. 8 Onye riri ya ga-aza ajụjụ maka mmehie ya n’ihi na o merụrụ àjà dị nsọ a chụụrụ Jehova. A ga-egbukwa onye ahụ.* 9 “‘Mgbe unu na-ewe ihe ubi n’ala unu, unu ewerechala ihe niile dị n’ọnụ ọnụ ubi unu. Unu atụtụkwala ihe unu hapụrụ* n’ihe ubi unu.+ 10 Unu aghọrọla mkpụrụ unu ghọfọrọ n’ubi vaịn unu. Unu atụtụkwala mkpụrụ vaịn dasasịrị n’ubi vaịn unu. Unu ga-ahapụ ha maka ndị ogbenye+ na ndị mbịarambịa. Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu. 11 “‘Unu ezula ohi.+ Unu eduhiela mmadụ.+ Unu aghọkwala ibe unu aghụghọ. 12 Unu ejila aha m aṅụ iyi ụgha,+ si otú ahụ mebie aha Chineke unu. Abụ m Jehova. 13 Unu erigbula mmadụ ibe unu.+ Unu apụnarala mmadụ ihe.+ Unu goo mmadụ ọrụ, unu ahapụla ịkwụ ya ụgwọ ọrụ ya chi abọọ.+ 14 “‘Akpọla onye ntị chiri iyi.* Edochikwarala onye ìsì ihe n’ụzọ.+ Tụọ egwu Chineke gị.+ Abụ m Jehova. 15 “‘Unu ekpela ikpe na-ezighị ezi. Unu emerela ogbenye ebere maka na ọ bụ ogbenye. Unu emenyekwarala ọgaranya maka na ọ bụ ọgaranya.+ Na-ekpenụ mmadụ ibe unu ikpe ziri ezi. 16 “‘Agala na-ekwutọsị onye ọzọ n’ihu ụmụnna gị.+ Agbala mbọ ka i gbuo mmadụ ibe gị.*+ Abụ m Jehova. 17 “‘Akpọla nwanna gị asị n’obi gị.+ I kwesịrị ịdọ mmadụ ibe gị aka ná ntị,+ ka ị ghara iso ya buru mmehie ya. 18 “‘Abọla ọbọ.+ Ebukwarala mmadụ ibe gị iwe n’obi. Hụ mmadụ ibe gị n’anya otú ị hụrụ onwe gị.+ Abụ m Jehova. 19 “‘Unu ga-edebe iwu ndị a m na-enye unu: Unu akpọtala anụ ụlọ abụọ na-abụghị otu ụdị anụ ka otu gbaa ibe ya. Unu aghakọtala ụdị mkpụrụ abụọ dị iche iche n’ubi unu.+ Unu eyikwala uwe e ji ụdị eri abụọ dị iche iche kpaa.+ 20 “‘Ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị enwee mmekọahụ, ya abụrụ na nwaanyị ahụ na-ejere nwoke ọzọ ozi, ya abụrụkwa na e kenyela nwaanyị ahụ nwoke ọzọ, ma nwoke ahụ agbarabeghị ya ma ọ bụkwanụ na nwaanyị ahụ enwerebeghị onwe ya, a ga-ata ha ahụhụ. Ma, a gaghị egbu ha n’ihi na nwaanyị ahụ enwerebeghị onwe ya. 21 Nwoke ahụ ga-ewetara Jehova àjà ikpe ọmụma ya n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute, ya bụ, ebule a ga-eji chụọ àjà ikpe ọmụma.+ 22 Onye nchụàjà ga-eji ebule ahụ a ga-eji chụọ àjà ikpe ọmụma kpuchiere ya mmehie ya n’ihu Jehova. A ga-agbaghara ya mmehie o mere. 23 “‘Ọ bụrụ na unu abata n’ala ahụ wee kụọ osisi ọ bụla nke unu ga-eri mkpụrụ ya eri, unu ga-ewere mkpụrụ ya ka ihe na-adịghị ọcha na ihe a na-anaghị eri eri.* Ọ ga-abụrụ unu ihe a na-anaghị eri eri ruo afọ atọ. Unu erikwala ya. 24 Ma n’afọ nke anọ, mkpụrụ ya niile ga-abụ mkpụrụ dị nsọ. Ọ ga-abụkwa oge ịṅụrị ọṅụ n’ihu Jehova.+ 25 N’afọ nke ise, unu nweziri ike iri mkpụrụ ya. Ọ ga-esozi ná mkpụrụ unu na-ewe n’ubi. Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu. 26 “‘Unu erila ihe ọ bụla ọbara dị na ya.+ “‘Unu agbala afa ka unu mata ihe ga-eme n’ọdịnihu. Unu emekwala anwansi.*+ 27 “‘Unu akpụla* ajị ndị dị n’akụkụ ntì unu. Unu akpụchapụkwala ọnụ afụ ọnụ* unu.*+ 28 “‘Unu ebekasịla ahụ́ unu maka onye nwụrụ anwụ.*+ Unu esenyekwala ihe n’ahụ́ unu. Abụ m Jehova. 29 “‘Emela ka nwa gị nwaanyị gbawa akwụna,+ si otú ahụ metọọ nwa gị nwaanyị. I mee otú ahụ, ịgba akwụna ga-eme ka ala unu rụọ arụọ, omume rụrụ arụ ejukwa n’ala unu.+ 30 “‘Unu ga na-edebe ụbọchị izu ike m.+ Unu ga na-akwanyere ebe a na-anọ efe m ùgwù.* Abụ m Jehova. 31 “‘Unu agakwurula ndị na-agba afa.+ Unu ajụkwala ndị na-akọ ihe ga-eme n’ọdịnihu ase,+ ka ha ghara ime ka unu bụrụ ndị na-adịghị ọcha. Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu. 32 “‘Ị ga-ebiliri onye isi awọ́.+ Ị ga-asọpụrụ agadi.+ Ị ga-atụkwa egwu Chineke gị.+ Abụ m Jehova. 33 “‘Ọ bụrụ na onye mbịarambịa binyeere unu n’ala unu, unu emegbula ya.+ 34 Unu ga-ewere onye mbịarambịa binyeere unu ka nwa afọ.+ Unu ga-ahụkwa ya n’anya otú unu hụrụ onwe unu n’anya, n’ihi na e nwere mgbe unu bụ ndị mbịarambịa n’Ijipt.+ Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu. 35 “‘Unu ejila ihe ọ bụla e ji atụ̀ ihe nke na-ezughị ezu tụọ ihe, ma ùnu na-atụ otú ihe hà n’ogologo ma ùnu na-atụ otú ihe dịruru n’arọ ma ùnu na-atụ otú ihe bururu n’ibu.+ 36 Unu ga na-eji ihe zuru ezu atụ̀ ihe. Jirikwanụ ihe zuru ezu e ji atụ̀ otú ihe dịruru n’arọ na ihe zuru ezu e ji atụ̀ ihe dị mmiri mmiri* nakwa ihe zuru ezu e ji atụ̀ ihe na-adịghị mmiri mmiri* na-atụ ihe.+ Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu, onye kpọpụtara unu n’Ijipt. 37 N’ihi ya, unu ga na-edebe iwu m niile, na-emekwa ihe niile m kpebiri ma na-eso ha.+ Abụ m Jehova.’”
^ Na Hibru, “na-atụ egwu nne ya na nna ya.”
^ Ma ọ bụ “ihe fọrọ.”
^ Ma ọ bụ “Abụla onye ntị chiri ọnụ.”
^ O nwere ike ịbụ, “Akwụrụla na-ele n’anya n’anya mgbe e nwere ihe ga-ata isi mmadụ ibe gị.”
^ Na Hibru, “ihe a na-ebighị úgwù.”
^ Ma ọ bụ “akpụlatala.”
^ Ọ ga-abụ na ihe a na-ekwu bụ ịkpụ ya otú ndị na-ekpere arụsị si akpụ nke ha.
^ Ma ọ bụ “maka mkpụrụ obi.” N’amaokwu a, okwu Hibru bụ́ ne′phesh pụtara onye nwụrụ anwụ.
^ Na Hibru, “hin zuru ezu.” Gụọ B14.
^ Na Hibru, “efa zuru ezu.” Gụọ B14.